Blockchain समाचार 05.06.2018 - Blockchain समाचार
जुन 5, 2018 व्यवस्थापक
Blockchain समाचार 05.06.2018
कोइनबेस जापान विस्तार
कोइनबेस जापान मा एक कार्यालय सुरु गर्न आफ्नो योजना घोषणा गरेको छ. घोषणा मा, कोइनबेस तिनीहरूले हरेक चरण मा कानुनी अनुपालन सुनिश्चित गर्न जापानी एफएसए संग काम गर्दै छन् र एक पटक अनुमोदित भने, जापान मानिसहरूलाई आफ्नो उत्पादन र सेवा प्रदान गर्न योजना.
स्वागत Fintech नेता नाउ Kitazawa
cryptocurrency को वैश्विक ग्रहण बढाउने हाम्रो प्रयास भाग रूपमा, आज हामी को सुरूवात घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कोइनबेस गरेको जापान कार्यालय. अत्यधिक-सम्मान र प्रशंसा fintech नेता को नेतृत्व अन्तर्गत, नाउ Kitazawa, जापानको गुप्त लगानीकर्ताले कोइनबेस उत्पादनहरू दायरा पहुँच लागि हाम्रो नयाँ कार्यालय जग राख्नु हुनेछ. अन्य बजार जस्तै, हामी जापान हाम्रो रोलआउट एक जानिजानि दृष्टिकोण लिन योजना, जो हरेक चरण मा स्थानीय कानूनको अनुपालन सुनिश्चित गर्न जापानी एफएसए संग हात-मा-हात काम मतलब.
Brazilians परम्परागत दलाली खाता भन्दा बढी गुप्त व्यापार खाता खोल्ने छन्
थप मानिसहरूलाई परम्परागत दलाली खाता भन्दा ब्राजिलमा cryptocurrency व्यापार खाता खोल्ने छन्.
एक वर्ष पहिले, Foxbit भनिन्छ एउटा विनिमय लगभग थियो 100,000 दर्ता प्रयोगकर्ता. आज, उनीहरुसँग छ 400,000 दर्ता अनुमानित बाहिर प्रयोगकर्ता 1.4 दुई भन्दा कम वर्ष 'समय मा उनलाई र उनको तीन मुख्य प्रतियोगिहरु संग खाता खोल्न गरेको लाख. को लगभग कि तुलना 600,000 जो स्टक दलाली खाता र यो हेर्न सादा छ: Brazilians cryptocurrency फेला पारेका छौं. मा 2016, Brazilians सारियो $160 Bitcoin र बाहिर लाख. गत वर्ष, यसलाई वरिपरि मारा $2.4 अरब.
"को मान्छे को लागि जो आफ्नो गद्दे अन्तर्गत डलर लुकाउन प्रयोग, अब तिनीहरूले Bitcoin मा लुकाउने छन्,"एडुआर्डो फरेरा भन्छन्, लण्डन Foxbit लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विकास टाउको. "यो यो खरीद विद्यार्थी हो. यो 60 वर्षीया बस चालक छ," उस्ले भन्यो.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 04.06.2018
क्राकेन DIGITAL ASSET EXCHANGE
$150एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
लागि Bitcoin को मूल्य 2018 On ...
BitMEX संबद्ध लिंक 10% बन्द:...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 04.06.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 06.06.2018